Mustaqbalka Raysal-Wasaare-nimo Ee Natenyahu Oo Mugdi La Galiyay. -
Benny Gantz, hogaamiyaha xisbiga Blue iyo White ee dalka Israil ayaa ku gacan saydhay dalab uga yimid Raysal wasaare Benjamin Netanyahu kaas oo ugu baaqay inuu ku biro dawlad isbaheysi ah oo uu hogaanka u qabto Netanyahu.
Gantz, oo ahaa mushar ay mucaaradad xoogan ka dhaxaysay Netanyahu intii ay socotay doorashadii dalkaasi ayaa u sheegay wariyeyaasha inuu isagu noqonayo ra’iisul wasaare hogaamiya dowlad midnimo oo ballaadhan.
In ka badan 97% codadkii doorashada Israel ee la dhiibtay ayaa la tiriyay, xisbiga Blue and White ee mucaaridka ah ayaana helay 33 kursi, halka xisbiga Likanyahu ee Netanyahu uu ka helay 31 kuri.
Gantz, oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidamada, ayaa ku gacan saydhay dalab ka dib markii Netanyahu uu ugu yeeray inay wada dhisaan dowlad midnimo, mar hadii labada xisbiba ay ku guuldaysteen inay helaan codadkii looga baahnaa inay dawlad madaxbanaan ku xoo dhisaan oo ah 61 cod.
Moshe Yaalon, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Blue and White, ayaa Khamiista sheegay in xisbigiisa “uusan gali doonin isbahaysi uu hogaaminayo Netanyahu”.
Netanyahu, ra’iisul wasaaraha Israel ee ugu waqtiga dheer, wuxuu sheegay inuu “mar la yaabay marna ka niyad jabay” diidmada xisbiga uu ay is hayeen ka soo yeedhay
Iran Oo Maraykanka Ku Eedaysay Dib U Dhac Ku Yimid Visa-hii ay Kaga Qaybgalayeen Shirka UN-ta.